Akụkọ - Ndụmọdụ iji belata ọkụ eletrik na ọsụsọ
Ndụmọdụ iji belata ọkụ eletrik dị na sweaters
Mgbe ị na-eyiri uwe oyi na uwe ya, imetụ ndị ọzọ aka, ma ọ bụ metụ ihe ọla aka na mberede, a na-ewepụta ya na mberede. Nwere ike ịhụ ọkụ ọkụ eletrik na ikuku. Ọ bụghị naanị aka gị ga-emerụ ahụ, kamakwa ọkụ eletrik na-agbapụta mgbe niile ga-emetụta ọrụ gị na ndụ gị.
Sweaters na-adị ọkụ ọkụ eletrik, n'ihi na akpụkpọ ahụ anyị, akwa ndị ọzọ na sweta na-akpakọrịta ma na-ete ibe ha aka, ọkachasị mgbe anyị na-eyiri ma ọ bụ na-ewepụ uwe, ọkụ eletrik na-eji nwayọ nwayọ. Mgbe ọ gbakọtara n'ọtụtụ dị elu, a ga-ahapụ ya niile n'otu oge, ọpụpụ ga-eme.
Kpochapu ọkụ eletrik a na-agbanyeghị na sweta: Tupu i tinye ma wepụ ya na sweta ahụ, jiri ihe igwe metụ sweta ahụ. Ma ọ bụ yikwasị brooch iji duzie ọkụ eletrik nke sweta na-ebu.
Zere ịchafụ nke ejiri kemịkal kemịkalụ mee, n'ihi na esemokwu dị n'etiti eriri kemịkal na ahụ gị ga-ewepụta ọkụ eletrik. Yiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ karịa akpụkpọ ụkwụ roba, n'ihi na ihe ndị na-egbochi roba na-egbochi mmetụ nke ebubo eletrik, na-eduga na nchịkọta nke ebubo eletrik.
Belata ọgbọ nke ọkụ eletrik na-arụ ọrụ na ọsụsọ: ịzụta ihe na-agba nro ma ọ bụ ntutu isi ma fesa ha na sweta iji gbochie ọkụ eletrik. Maka nro dị nro nwere ike ime ka mmiri nke ọsụsọ na-abawanye, na ịgba ntutu nwere ike belata ọkụ eletrik. Ma ọ bụ jiri akwa nhicha nke mmiri mmiri na-agba nke ọma ma kpochapụ ya na mmiri iji hichaa sweta. Wet sweta ntakịrị iji belata ogo nke nkụ nke sweta ma belata ọgbọ nke ọkụ eletrik.
Meziwanye ụzọ nke ịsacha ọsụsọ: tinye soda, mmanya ọcha ma ọ bụ ihe dị nro mgbe ị na-asacha sweaters. O nwere ike ime ka uwe dị nro, belata nkụ nke ihe, ma nyere aka belata ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe.
Mee ka iru mmiri nke gburugburu ebe obibi dịkwuo elu: Mgbe ihu igwe na-akpọ nkụ, a naghị ebufe ikuku eletrik na-ekpo ọkụ na ikuku. Can nwere ike iji iru mmiri iji mee ka iru mmiri dị na ikuku, ma ọ bụ tinye akwa mmiri ma ọ bụ iko mmiri na kpo oku iji nwee mmetụta yiri ya.
Tịnye anụ ahụ: Tinye moisturizer n'akụkụ anụ ahụ nke na-akpọtụrụ ọsụsọ ma ọ bụ jiri ntutu na mpempe akwụkwọ dị nro na-adị mfe. Ọbụghị naanị na enwere ike ịchekwa akpụkpọ ahụ n'oge oyi, mana ọbụlagodi ma ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ etere mmanụ na-akpakọrịta na akwa sweta, ọ naghị adị mfe ịmepụta ọkụ eletrik.